သူကြီးမင်း (တုံးဖလား): May 2015
ရှေးဆုိုရုိုးစကားတွေ ပြောင်းသင့်ရင် ပြောင်းပစ်ရမယ်။
"လင်နှင့်မယား လျာနှင့်သွား" ဆုိုတဲ့ ဆုိုရုိုးစကားဟာ သူကြီးအတွက်တော့ မှားတယ်။
အဲဒါ နှုတ်ခမ်း သွေးတွေ။
မကြာမကြာ ကိုက်မိပြီး အဲဒီလုို ဖြစ်နေကျ။
ငန်ကျိကျိ စပ်သပ်သပ်နဲ့ နေရခက်ပါ့။
Posted by သူကြီးမင်း (တုံးဖလား) at 13:074comments:
ဆုပ်လည်း စူး စားလည်း ရူး
ရှေ့ တိုး ထမ်းပုိုး နောက်ဆုတ် လှည်းထုပ်။
ဝေလည်း မွှေး ကြွေလဲ မွှေး
ဘယ်သူသေသေ ငတေမာရင် ပြီးရော။
သူငယ်ချင်းလို့ဘဲ ဆက်၍ ခေါ်မည် ခုိုင်။
Posted by သူကြီးမင်း (တုံးဖလား) at 13:332comments:
Posted by သူကြီးမင်း (တုံးဖလား) at 15:073comments:
ဒီနေ့ ၁၃၇၇ ခုနှစ် ကဆုန်လပြည့် (၀၂၊၀၅၊၂၀၁၅) စနေနေ့။ ဗုဒ္ဓနေ့။
ဗုဒ္ဓနေ့အကြောင်းတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့လဲ ဗုဒ္ဓနေ့ကြီးဆုိုတော့ ဗုဒ္ဓနေ့အကြောင်းလေးနဲ့တော့ ဆက်စပ်ပေသပေါ့။ ဖွားမြင်ဖြစ်စံ၊ ဗျာဒိတ်ခံ၊ မှတ်ရန်ကဆုန်လပြည့်..ဆုိုပြီး ငယ်စဉ်ကထဲက မှတ်မိနေခဲ့တယ်။ ဒီကဆုန်လပြည့်နေ့ဟာ ဂေါတမဘုရားရှင်ရဲ့ ဘ၀တစ်လျှောက် ထူးခြားခဲ့တဲ့ နေ့ထူးနေ့မြတ်ကြီးဘဲမဟုတ်လား။ ဖွားမြင်ခဲ့တာလဲ ဒီကဆုန်လပြည့်နေ့၊ ဘုရားအဖြစ်သုို့ ရောက်ရှိခဲ့တာလဲ ဒီကဆုန်လပြည့်နေ့၊ ဘုရားရှင် ပရိနိဗ္ဗာန်စံဝင်တော်မူခဲ့တာလဲ ဒီကဆုန်လပြည့်နေ့၊ ပြီးတော့ လေးအသင်္ချေနှင့်ကမ္ဘာတစ်သိန်းထက်က ဒီပင်္ကရာမြတ်စွာဘုရားရှေ့မှောက် ဘုရားဖြစ်ဖုို့ရာ ဗျာဒိတ်ခံတော်မူခဲ့တာလဲ ဒီကဆုန်လပြည့်နေ့။ ဒီတော့ ပုဂ္ဂိုလ်ထူးတွေရဲ့ ထူးခြားတဲ့ နေ့ကောင်းရက်မြတ်ကြီးဘဲ မဟုတ်လား။
" It isaGirl"
ဟော.. ပုဂ္ဂိုလ်ထူးတွေ ဖြစ်ပေါ်လာရာ ဒီကဆုန်လပြည့်နေ့မှာ မင်းသားဝီလျံနှင့်မင်းသမီးကိတ်တုို့ ဇနီးမောင်နှံအတွက် နောက်ထပ် ရင်သွေးလေးတစ်ယောက်ကို ဒီနေ့မနက် ၈ နာရီ ၃၄ မိနစ်အချိန်မှာ မွေးဖွားပေးလုိုက်ပြန်ပါပြီ။ မိန်းခလေးလေးပါ။ သူတုို့အတွက် ဒုတိယမြောက် ကလေးလေးပါ။ လန်ဒန်မြို့လယ်က စိန့်မေရီဆေးရုံမှာ မွေးဖွားခဲ့တာပါ။ အလေးချိန် 8lbs 3oz (3.7kg) ရှိပါတယ်။ နန်းပလ္လင်အတွက် တန်းစီနေတဲ့ သူတွေစာရင်းထဲမှာ လေးယောက်မြောက်ပါ။ ဘုရင်မကြီးရဲ့ နန်းပလ္လင် နေရာကို တန်းစီနေသူတွေကတော့ သူမရဲ့ဘုိုးဘုိုး မင်းသားချားလ်၊ သူမရဲ့ ဖေဖေ မင်းသားဝီလျံ နှင့် သူမရဲ့အကုို မင်းသားဂျော့ဂ်ျကိုယ်တုိုင်ပါဘဲ။
ပထမကလေးက ယောက်ျားလေးဆုိုတော့ ဂျော့ဂ်ျလုို့ နာမည်ပေးထားခဲ့တယ်။ ဂျော့ဂ်ျကိုလဲ အဲဒီ စိန့်မေရီဆေးရုံမှာဘဲ မွေးဖွားခဲ့တာပါ။ အခု မိန်းခလေးဆုိုတော့ ဘယ်လုိုနာမည်ပေးမလဲတော့ မသိဘူး။ ဒါပေမဲ့ အင်္ဂလိပ်တွေ ထုံးစံအတုိုင်း နာမည်အတွက် အလောင်းအစားလေးတွေတော့ ပေါ်လာနေပါပြီ။ Alice လုို့ပေးမလား Charlotte လုို့ ပေးမလား Vitoria လုို့ ပေးမလား Elizabeth လုို့ပေးမလား Diana လုို့ပေးမလားဆုိုပြီး စသဖြင့်ပေါ့။
((Coral is still betting on the name of the baby, with Alice the clear favourite at 5-4. Charlotte is the 5-2 second favourite, ahead of Elizabeth at 5-1, while Victoria has been backed into 6-1 from 10-1. (Mirror))).
ဘီဘီစီသတင်း ဘီဘီစီဝက်ပေ့ဂ်ျတွေမှာလဲ သူတုို့အကြောင်းတွေ ဆက်တုိုက် တင်ဆက်ပေးနေကြတယ်။ ဘုန်းကံကြီးမားသူဆုိုတော့ လူမဖြစ်ခင်ကတည်းက ကမ္ဘာကျော်နေလေပြီ။ ဘုန်းကံ ကြီးပေမပေါ့။ ဒီကလေးမလေးကုို ကိုယ်ဝန်စတည်တာကလဲ တကယ့် လပြည့်နေ့ကြီးကိုး။
၁၃၇၆ ခု တော်သလင်းလပြည့်နေ့ (၀၈၊ ၀၉ ၊ ၂၀၁၄) တနင်္လာနေ့ (ဂရုဓမ္မအခါတော်နေ့)မှာ ကုိုယ်တည်ပြီး ဟော အခု တကယ့်နေ့ထူးနေ့မြတ် ကဆုန်လပြည့်နေကြီးမှာ မွေးဖွားခဲ့တယ်ဆုိုတော့ ကလေးမလေးရဲ့ ဘုန်းကံကုို စဉ်းစားသာ ကြည့်ကြပေတော့။ ဒီကလေးမလေးရဲ့ ဘုန်းလဲ မုိုးသုို့ချုန်းဦးမှာပါဘဲ။
အားပေးကြသူ ပရိသတ်လူထုကြီးကတော့ ဆေးရုံအနီး ၀န်းရံလုို့။ ဘက်ကင်ဟမ်နန်းတော်အနီး စုရုံုးလုို့။ သတင်းသမားတွေကလဲ တုိုက်ရုိုက်လွှင့်။ ပြီးတော့ စောင့်မျှော်ပေဦးတော့ တဖွဲဖွဲ ရောက်လာကြမဲ့ ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ ကွန်ဂရက်ကျူးလေးရှင်းတွေ။
သူတုို့အကြောင်း ဆက်လက် ဖတ်ချင်သေးရင်...
မင်းသမီးကိတ် ပထမကလေး မွေးဖွားခြင်း
Posted by သူကြီးမင်း (တုံးဖလား) at 13:264comments: